के तपाईंको भूतपूर्वसंग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सम्भव छ? | बेजिया
मारिया जोस रोल्डन | 26/04/2021 22:00 | सम्बन्ध
धेरै व्यक्ति विच्छेदन पछि यदि आश्चर्य, यो सम्भव छ कि पुरानोसँग राम्रो मित्रतालाई निरन्तरता दिन। त्यहाँ शंका छ कि व्यक्ति मा हुन सक्छ र हो कि एक सामान्य र लगातार स्थिति को बावजुद, यो एक समय को लागी एक जोडी भएको छ जो एक व्यक्ति संग एक मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न गाह्रो छ।
यस्तो हुन सक्छ कि सुन्दर मित्रता गएको छ, तर यस विषयका पेशेवरहरूले सम्भावित समस्याहरूबाट बच्न पूर्वको साथ दूरी राख्न सल्लाह दिन्छन्।
1 तपाईंको भूतपूर्वसँग मैत्री
2 के तपाईंको भूतपूर्वसँग मैत्री कायम गर्न सम्भव छ?
3 यदि शंका उत्पन्न हुन्छ भने के गर्ने
तपाईंको भूतपूर्वसँग मैत्री
जब एक जोडी विच्छेद गर्दछ, त्यहाँ दुई धेरै भिन्न परिस्थितिहरू हुन सक्दछन्: नराम्रा रूपमा अन्त्य हुन्छ र सधैंभरि एक अर्काको बारेमा जान्न चाहँदैन वा एक मैत्री तरिका मा समाप्त र साथीहरु संग एक राम्रो सम्बन्ध बनाउने। यो सत्य हो कि प्राय जसो अवस्थामा, भूतपूर्वको साथ सम्बन्ध जारी राख्नु विरलै हुन्छ किनकि प्रत्येक व्यक्तिले विगतलाई पछाडि छोड्छ र नयाँ जीवन सुरु गर्ने निर्णय गर्दछ। समयको साथसाथै, यदि इरादे राम्रो छन् भने पनि, भावनाहरूको एक श्रृंखला देखा पर्न सक्छ जुन पूर्ण रूपमा माथि उल्लिखित मित्रता सम्बन्धमा बाधा उत्पन्न गर्दछ।
के तपाईंको भूतपूर्वसँग मैत्री कायम गर्न सम्भव छ?
सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा भनेको भाँचिएको पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई छोड्नु र जीवनलाई फेरि बनाउने प्रयास गर्नु हो। भग्नावशेष उत्तम तरिकामा समाप्त भएको तथ्यलाई बावजुद, यो हिंड्नु राम्रो हो ताकि घाउहरू पूर्णरूपमा निको भई सदाको लागि निको हुन सक्छ। यो हुन सक्छ र यो जोखिम छ कि यो मित्रता सम्बन्धको पछाडि, के खोजिएको छ जोडीलाई फेरि फर्कनुहोस्।
त्यसकारण विशेषज्ञहरूले निर्णय लिनु अघि आवश्यक पर्ने सबै कुरामा चिन्तित हुन सबैलाई सल्लाह दिन्छन्। TO यहाँबाट, यो दुईको कुरा मित्रताको सम्बन्ध बनाउन वा पूर्ण विस्मरणको लागि विकल्प छ।
यदि शंका उत्पन्न हुन्छ भने के गर्ने
यदि दम्पतीको अन्य भागले निश्चित मित्रता सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ भने पनि तपाई त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्नुहुन्न भने साथीको साथ बस्नु राम्रो हो र यसलाई बुझाउनु यो राम्रो उपाय होईन। यस्तो हुन सक्छ कि एक निश्चित मित्रता कायम राख्दा चीजहरू झन् झन् खराब हुन्छ।
विगतमा फर्केर नआउन आफैसँग समय बिताउनु र नयाँ व्यक्तिहरूलाई भेट्ने प्रयास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो न राम्रो हो न त राम्रो हो न विगतमा आफूलाई लंगर गर्न र वजन नलगाउन। यो ब्रेकअप को शोक प्रक्रिया को माध्यम बाट जाने र स्क्र्याच शुरू गर्न सल्लाह दिइन्छ।
याद राख्नुहोस् कि मित्र हुनु भनेको राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु बराबर छैन। केहि पनि हुँदैन मैत्री तरीकाले निश्चित सम्बन्ध अन्त्य गर्न यहाँबाट जान्छ, विगतलाई छोड्नुहोस् र कुनै समस्या बिना जीवन जारी राख्न सक्षम हुनुहोस्।
छोटो, यो धेरै जटिल र गाह्रो छ तपाईंको भूतपूर्वको साथी बनाउन। धेरै जसो केसहरूमा, व्यक्ति जो सम्बन्ध समाप्त गर्दछन्, शान्तिमय रूपमा यसलाई गर्न रुचाउँछन् र कुनै पनि समस्या बिना आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुन कुनै पनि प्रकारको भावनाहरू बिर्सन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » के तपाईंको भूतपूर्वसंग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सम्भव छ?